Consulate French nke New York na-ewepụta mmanya Val de Loire: Partie Une
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Consulate French nke New York na-ewepụta mmanya Val de Loire: Partie Une
culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Mmanya & mmuo
Ọ bụ ehihie Sọnde mara mma na Manhattan. Eji m ndidi guzoro n’ahịrị dị ogologo na mpụga Consulate French dị na Fifth Avenue, ọ tụrụ m n’anya otú ọtụtụ mmadụ nwere mmasị ịmụ banyere mmanya nke ndagwurugwu Loire n’otu ehihie Sunday na New York.
Ọ bụ ezie na ajụrụ m mmadụ ole na ole n'ime ndị guzo n'akụkụ m gbasara nhọrọ ha na-eme na ngwụcha izu ụka a zuru oke, enwechaghị m ihe ịga nke ọma n'ịmụta mkpali ha. Ikekwe ọ bụ ohere izute onye ama ama sommelier Pascaline Lepeltier onye enyerela otuto maka mmanya ya na nka nri ya; ikekwe ọ bụ eziokwu na e mere ihe omume ahụ na Consulate French mara mma, ma ọ bụ ikekwe ndị bịaranụ na-enwe mmasị ịnụ ụtọ ya. otu iko mmanya French na izu ụka. Ihe ọ bụla na-akpali akpali, ihe omume ahụ dị egwu, mmanya na-agba ọsọ site na-adọrọ mmasị gaa na magburu onwe ya ma ọ bụrụ na a ga-emeghachi ihe omume ahụ, m ga-abụ otu n'ime ndị mbụ na RSVP.
Ugbu a. Banyere mmanya
(Na-egbuke egbuke). 100 Chenin Blanc
Xavier Weisskopf malitere Le Rocher des Violette na 2005. Ọ gụrụ akara mmanya na Chablis na Beune na-enweta akara ugo mmụta na viticulture na oenology. Ọrụ mbụ ya bụ Louis Barruol na Gigondas, onye na-emepụta Chateau de Saint Cosme, bụ ebe ọ ghọrọ Chef du Cave, na-eme mkpụrụ osisi anọ n'oge ya na Chateau.
Ịhụnanya o nwere maka Chenin Blanc wetara ya na mpaghara Saint Martine le Beau nke Montlouis (na-eche Vouvray ihu n'ofe Loire), mpaghara a na-ewere dị ka otu n'ime nnukwu mmanya ọcha abụọ nke Touraine. N'oge ahụ, mpaghara akụkọ ihe mere eme enweghị ekele na Weisskopf nwere ike nweta 22.5-acres nke osisi vine ochie dị nsọ gụnyere ngwugwu 10-acre nke Chenin tozuru okè na ụrọ na six n'elu ala limestone, gbakwunyere nnukwu ụlọ nkume narị afọ nke 15, nke mbụ. otu ebe a na-egwupụta nkume gwuru miri n'ime ụlọ akụ limestone nke Loire dị na Amboise (a na-akụkarị tupu WW11). Ọrụ ya: mee ka mmanya doo anya na ilekwasị anya. Osisi vine ya niile nwere ikike nke organic, na-enye ohere ka osisi vine ochie ndị a dị oke ọnụ ahịa gosipụta ezi onwe ha. Nkà ihe ọmụma ọdịnala ya gbatịrị ruo n'ọnụ ụlọ ebe o jiri gbọmgbọm ochie na-egosi nchụso ya maka ezi ahụmịhe Chenin.
A na-egbutu osisi vaịn maka obere mkpụrụ nke hectare 30-35 kwa hectare (osisi vine ochie na-enye ihe dị ka 25 hs / ha) na-eji aka eme ihe ubi. A na-ahọrọ barel osisi n'elu ígwè maka mgbanwe ikuku oxygen nke osisi na-enye nke na-eji nlezianya na-echekwa mkpụrụ osisi na-ahapụghị osisi oak ahụ.
A na-eme Petillant Originel (Pet-Nap; bubbling eke) site na iji usoro nna ochie ebe a na-etinye mmanya tupu emechaa gbaa ụka mbụ na-enweghị mgbakwunye nke yists abụọ ma ọ bụ sugars. Usoro oge ochie a na-emepụta mmanya na-egbuke egbuke dị mfe karị, nke na-egbukepụ egbukepụ, nke na-enweghị nzacha na nke nwere ike na-ekpuchi ma ghara ịfụ ya.
Usoro Petillant Originel bụ aha a kapịrị ọnụ nke Montlouis sur Loire vignerons kere na 2007. Iji ruo eru maka aha a ga-emerịrị mmanya na-enweghị ihe mgbakwunye yist na na-enweghị mgbakwunye nke liqueur de tirage (ụkpụrụ shuga agbakwunyere n'oge ahụ). nke karama iji nye gbaa ụka na-aga n'ihu na-abawanye) ma ọ bụ liquer d'expedition (sugar agbakwunyere n'oge disgorgement). A ghaghị ime mmanya ahụ naanị site na mkpụrụ vaịn mbụ, shuga ha na afọ ụmụ amaala.
2017 Le Rocher des Violette Petillant mbụ bụ nke sitere na organic na pasent 100 Chenin Blanc toro na nkume-limestone sitere na vine gbara afọ 40+. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmanya na-agba agba n'ime akpa osisi ochie, 2/3 n'ime tankị igwe anaghị agba nchara. A na-etinye ya na yist nke ala, usoro onunu ogwu efu.
A na-eme ka afụ dị nro pụta ìhè na-acha odo odo ya na-acha odo odo na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke iji tọọ anya ụtọ; imi na-achọpụta egusi, apple odo, citrus ọkụ, ahịhịa lemon, na ginger. Ọnụ ọnụ ọnụ na-achọta ndetu ifuru na brioche, nke ihe ngosi mmanụ aṅụ na-akwalite. N'ịbụ onye nwere nnukwu acidity kpọrọ nkụ, ahụmahụ a na-atọ ụtọ na-ejikọta ya na salmon, anụ ọkụkọ, cheese (s) dị nro na dị nro.